Shan jirkii 5-ta maalmood ku jiray god dhirirkiisu yahay 32 mitir oo geeriyooday - Caasimada Online
Home Warar Shan jirkii 5-ta maalmood ku jiray god dhirirkiisu yahay 32 mitir oo...
Shan jirkii 5-ta maalmood ku jiray god dhirirkiisu yahay 32 mitir oo geeriyooday
Rabat (Caasimada Online)- Rejo niyadjab ah ayuu kusoo gabagaboobay howlgalka waqti badan qaatay ee lagu soo badbaadin rabay Rayan Khaled Oram oo ah 5 jir u dhashay Dalka Morocco kuna dhacay Ceel dhirirkiisu gaaraya 32 Mitir.
Boqortooyada Morocco ayaa ku dhawaaqday in uu dhintay Saqiirka ku saxariiray Godka uu ku dhacay oo uu ku go’doonsanaa tan iyo talaadadii todobaadkii hore 1da Febaraayo 2022, Boqor Maxamedka Lixaad ee Morocco oo la hadlay Waalidka Rayan ayaa u tacsiyeeyay.
Dunida oo dhan waxa ay la socotay howlgalkaan baaxadda weyn, Kooxda gurmadka sameysay ayaa welwel ka qabay sida uu Rayan ku heli karo Neefta Macmalka ah inta u dhaxeysa Godka laga soosaarayo ilaa Gaariga loo diyaariyay in lagu geeyo Isbitaalka.
Rayaan waxaa iska dhalay Khaled Oram & Wasima Kharsheesh, qoyskaan ayaa degen Magaalada Tamorot ee dhacda Waqooyiga Morocco, markii ugu horreysay ee rejo laga muujiyay noloshiisa waxa ay ahayd kaddib markii Kaamirooyin lagu riday Ceelka ay soo qabteen muuqaalka Wiilkaan oo nuux-nuuxsanaya.
Waalidkiisa kama aanay tegin godka oo waxa ay rejo ka qabeen in uu dib ula midoobo maadaama indhahooda ay ku arkayeen dad badan oo isugu soo baxay sidii Ceelka looga soosaari lahaa Rayan Khaled Oram ilaa laga xaqiijiyey in uu geeriyooday.